"Wuxuu Lahaa Dabo Weyn" - David Moyes Oo Sharaxay Sababtii Uu U Diiday Inuu La Soo Wareego Harry Maguire Markii Uu Ahaa Macalinka Man United - Gool24.Net
“Wuxuu Lahaa Dabo Weyn” – David Moyes Oo Sharaxay Sababtii Uu U Diiday Inuu La Soo Wareego Harry Maguire Markii Uu Ahaa Macalinka Man United
Tababarihii hore ee Manchester United David Moyes ayaa shaaca ka qaaday inuu ka fiirsaday inuu Harry Maguire keeno Old Trafford waqtigii uu kooxda macalin ka ahaa, laakiin u dhaqaaqistiisa ay ka horistaagtay in daafaca ay dabadiisa weyneyd waqtigaas.
United ayaa ceyrsaneysay Maguire xagaagan oo dhan waxaana ay ugu danbeyn kula soo wareegeen heshiis 85 milyan ginni ah taasoo ka dhigeysa daafaca dunida ugu qaalisan.
Daafaca dhexe ayaysan waqti dheer ku qaadanin inuu la qabsado kooxdiisa cusub isagoo soo bandhigay qaab ciyaareed aad u fiican kulankii ay Red Devils 4-0 kaga badisay Chelsea.
Moyes oo laga ceyriyay shaqada Man United 10 bilood uu tababare ka ahaa sannadii 2014 ayaa shaxaad ka bixiyay sababta uu u go’aansaday inuusan la soo wareegin Maguire oo markaas joogay kooxda Sheffield United.
Isagoo saaka u hadlayay barnaamijka Sports Breakfast ee idaacada Ingariiska ee talkSPORT, Moyes ayaa yiri: “Iskuma dayin inaan la soo wareegno, laakiin waan la soconay xaaladiisa waqtigaas.
“Waan la socday xaaladaha ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalada heerarka hoose, oo markii aan Everton joogay waan soo saari jiray ciyaartoydaas waxaa ka mid ahaa Tim Cahill.
“Harry Maguire waxa uu ka mid ahaa ciyaartoyda ay indhaheyga qabteen. Waxaa uu ciyaarayay kulan ay Sheffield ka hor timid Preston North End, waan daawaday, wuxuuna u ciyaaray si fiican laakiin waqtigaas waxa uu lahaa dabo aad iyo aad u weyn.
“Markaad aragto waxaa niyada iska leedahay ‘ilaa iyo intee ayuu weynaan doonaa Harry’ sababtoo ah markaas aad uu u yaraa.
“Laakiin haatan qaab dhismeedka jirkiisa aad ayuu u fiican, waxna kama uusan bedelin qaab ciyaareedkiisa. Markii aan tagay United waxaan heysanay Vidic, Rio, Jonny Evans, Michael Keane, Phil Jones, Chris Smalling
“Sidaasi darteed inaan soo iibsano daafac dhexe oo da’ yar ma aheyn wax aan u baahneyn waqtigaas.
“Harry Maguire isna waxay aheyd inuu safar soo maro. Mararka qaar ciyaartoyda waxa ay u baahan yihiin inay safar soo galaan si ay u tagaan halka ay aheyd inay tagaan. Haddii markaas aan keeni lahaa waa uu rafaadi lahaa.”